ဒုချီးရားတန်း ကျေးရွာသတင်း ALD ပါတီက ရှင်းလင်း
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ် ဒုချီးရားတန်းကျေးရွာမှာ မွတ်စလင် ကျေးရွာသားတွေကို တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းဌာနတစ်ချို့က ဖေါ်ပြခဲ့တာဟာ မှားယွင်းရေးသားကြတာသာဖြစ်ကြောင်း ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ALD ပါတီက ဒီနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ ပြည်လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ Cafe 47မှာ ဒီနေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပစဉ် ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသာအောင်က ပြောခဲ့တာပါ။
“ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့ ဒုချီးရားတန်းကျေးရွာမှာ မကြာခင်ကဖြစ်သွားတဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ တချို့သတင်းဌာနတွေက မမှန်သတင်းတွေ လွှင့်ထုတ်တယ်၊ ဒါကိုအခြေခံပြီး တချို့သံရုံးတွေ ကလည်း တောင်းဆိုချက်တွေ ထုတ်ပြန်တယ်၊ ဒီလိုမမှန်သတင်းတွေ တောင်းဆိုချက်တွေ လုပ်နေတာဟာ အေးချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးလို့ ပြောနေပေမယ့် တစ်ဘက်မှာလည်းလဲ တစ်ဖက်သတ် ဘက်လိုက်မှုတွေ မမှန်သတင်းတွေနဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေ လုပ်တဲ့သဘောမျိုးတွေဖြစ် တယ်၊ အဲဒါကြောင့်မို့ နှစ်ဘက်တင်းမာမှုတွေ ပိုဖြစ်လာတယ်၊ တင်းမာမှုတွေကြောင့် နောက်ထပ်ရခိုင် မှာ တင်းမာမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒါတွေကို ဆင်ခြင်ဖို့ ပြောတာဖြစ်တယ်”
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ RNDP ကလည်း မောင်တောမြို့နယ် ဒုချီးရားတန်းကျေးရွာကိစ္စကို နိုင်ငံတကာ သတင်းဌာနတွေက ဖော်ပြချက်တွေဟာ မှားယွင်းနေကြောင်း ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက်မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့က လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ တပ်ကြပ်ကြီးတစ်ဦး ပျောက်ဆုံးခဲ့သလို အဲဒီကျေးရွာက မွတ်စလင်အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးတစ်ချို့ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံရတာတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက် သေဆုံးသူ ၄၀ နီးပါးလောက်အထိ ရှိတယ်လို့ နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာ ရေးသားကြပါတယ်။
မနေ့ကလည်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင် အပါအဝင် အစိုးရအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေက ဒုချီးရားတန်းကျေးရွာ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားသံအမတ်ကြီးတွေနဲ့ သတင်းမီဒီယာတချို့ကို ရန်ကုန်မြို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ တွေ့ဆုံရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်ကလည်း အဲဒီကျေးရွာကို ပြည်တွင်းသတင်းဌာနတွေကို သွားရောက်လည်ပတ်ခွင့် ပြုသွားမယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
Buddha said cheating is one of the five basic sins.Try to tell the right things Mr. Aye Thar Aung, you are old enough to say right things. Life is too short and let your racist party members to do for the developmenr of Rakhine State. Don't put your party into Burma trap. You guys can get only hate among those who are living in Rakhine State if you all still doing racism. Rakhine State never be develop with hater-ism.
The press release of RNDP and ALD are totally TRUTH!!!
The press release of RNDP and ALD are totally false.
[RFA ၏ အသုံးပြုခွင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ အယ်ဒီတာက တည်းဖြတ်ထားပါသည်။]
Jihad ဆိုတာ ဘာမှန်း သေသေချာချာ မသိပဲ ပေါ့ပေါ့တန်တန်ဆဲရေးနေကြသူတွေ သိဘို့ပါ။ ကြောက်ဖို့ ပြောတာ မဟုတ်။ သူတို့လို ကိုယ်က အသေမခံနိုင်ပဲ ပါးစပ်အားတိုင်း ဆဲမနေပါနဲ့။ သူတို့ တကယ်လုပ်လာရင် ဘယ်လို ကာကွယ်မယ်ဆိုတာ စဥၤ်းစား ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုပါတယ်။